विज्ञ भन्छन्- दसैंमा काठमाडौंबाट घर जानेले गाउँ-गाउँ पुर्‍याउन सक्छन् कोरोना :: Setopati
विज्ञ भन्छन्- दसैंमा काठमाडौंबाट घर जानेले गाउँ-गाउँ पुर्‍याउन सक्छन् कोरोना
विवेक राई काठमाडौं, असोज १८
यसवर्षको दसैं नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं उत्यकामा भने कोरोना भाइरसको संक्रमण झन् झन् उकालो लाग्दै गएको छ। शनिबार मात्रै उपत्यकामा एक हजार १ सय ७७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए।
पछिल्लो सातादेखि देशभर थपिने संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकाका छन्। सरकारले समेत उपत्यका संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै आएको छ।
विज्ञहरूले यो वर्ष उपत्यकाबाट दसैंमा घर जानेहरूसँगै संक्रमण गाउँगाउँमा फैलिनसक्ने ठूलो जोखिम रहेको औंल्याएका छन्।
संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, 'दसैंमा दुई चार सय हैन लाखौं मानिस गाउँ जान्छन्। त्यसरी जानेहरूबाट संक्रमण फैलिने ठूलो डर छ। पहिले संक्रमण फैलिएर हराइसकेको ठाउँमा पनि पुनः संक्रमण फैलिने डर छ।'
त्यसरी दसैंमा घर जाँदा आफूमा संक्रमण नभए पनि यात्राका क्रममा संक्रमण हुनसक्ने र त्यसबाट आफ्ना घरका सदस्यहरूमा सर्ने जोखिम रहने डा. सुवेदी बताउँछन्। उनले भने, 'सबैमा लक्षण हुने भएपनि थाहा हुने थियो। त्ससैले हिँड्ने बेलामा संक्रमण नभए पनि बाटोमा लाग्न सक्छ। जसले गर्दा गाउँघरमा संक्रमण फैलिने जोखिम असाध्यै छ।'
सकेसम्म यसव र्ष उपत्यकाबाट दसैंमा घर नजान उनको सुझाव छ। उपत्यकाबाट घर जानेहरूले थोरै पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न चुकेमा त्यसले परिवारका अन्य सदस्यमा संक्रमण सर्ने जोखिम रहने उनको तर्क छ।
यद्यपि दसैंमा घर नजाने कुरा फेरि व्यवहारिक पनि नभएको भन्दै उनले उपत्यकाबाट घर जानेहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने जनाए।
त्यसका लागि अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न, ठूलो जमघट नगर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न उनको सुझाव छ। साथै घरमा रहेका ज्येष्ठ सदस्यहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन पनि उनकाे आग्रह छ।
डा. सुवेदी भन्छन्, 'काठमाडौंबाट जानेहरूले सकेसम्म परिवारका ज्यष्ठ सदस्यहरूको नजिक नगएकै राम्रो हुन्छ। नमस्कार पनि अलिक टाढाबाटै गर्दा सुरक्षाको दृष्टिले बेस हुन्छ।' त्यस्तै टिका लगाउँदा वा भेला हुँदा पनि विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
सकेसम्म टिका लगाउँदा भिडभाड नगर्न र बन्द कोठा भेला नहुन उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, 'टिका लगाउँदा एकैचोटी धेरै भेला हुनु हुँदैन। दूरी कायम गरेर टिका लगाइदिनुपर्छ। त्यसरी गर्दा संक्रमण सर्ने जोखिम धेरै कम हुन्छ। टिका लगाउँदा पनि मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ।'
काठमाडौं उपत्यकाबाट संक्रमितहरू घर घर पुगे त्यसले गाउँ भन्दा पनि ठूलो जनघनत्व भएका सहरहरूमा संक्रमणको जोखिम बढाउने डा. सुवेदी बताउँछन्।
गाउँघरमा वस्ती पातलो हुने भएकाले धेरैमा संक्रमण फैलिन नपाउने र त्यसको निश्चित अवधिमा संक्रमण हराएर जाने उनले बताए। तर ठूला जनघनत्व भएका सहरहरूमा भने काठमाडौंबाट संक्रमितहरू पुगेमा संक्रमण छिटो फैलिनसक्ने उनको बुझाइ छ।
उनले भने, 'ठूलो जनघनत्व भएका ठाउँहरूमा पहिले पनि संक्रमण फैलिहरेकै होला तर धेरै संक्रमितहरू भेला हुँदा संक्रमण दर फेरि माथि जानसक्छ। त्यसैले काठमाडौंबाट त्यस्ता ठाउँहरूमा जाँदा संक्रमण बढ्न मद्दत गर्छ।'
टेकु अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुन पनि उपत्यकाबाट घर जानेहरूले संक्रमण सँगै बोकेर जाने जोखिम प्रबल रहेको बताउँन्।
उनले संक्रमितहरू लक्षणविहीन अवस्थाका पनि हुने र ती व्यक्तिहरू घर जाँदा घरका अन्य सदस्यमा संक्रमण फैलिने सम्भावना रहेको जनाए।
डा. पुन भन्छन्, 'अहिले पनि अधिकांश संक्रमितहरूमा लक्षण देखिएको छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू बसमा घर जाँदा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा त्यहीँ संक्रमण फैलिन सक्छ। जसले गर्दा घर पुगेपछि अन्य सदस्यमा पनि संक्रमण सर्ने जोखिम हुन्छ।'
दसैंमा घर जानेहरूले बसमा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 'घर जाँदा बसमा यात्रा गर्दा बारम्बार आँखाहरू मिच्नु हुँदैन। सकेसम्म अरूसँग कुरा गर्नुहुँदैन। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरे संक्रमण सर्नसक्ने जोखिम निकै कम हुन्छ।'
डा. पुनले पनि उपत्यकाबाट घर जानेहरूबाट परिवारमा संक्रमण सर्ने जोखिम रहेको भन्दै सकेसम्म परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरूसँग नजिक नपर्न सुझाएका छन्।
उनले टिका लगाउँदा पनि भिडभाड नगरी खुला ठाउँमा लगाउन आग्रह गरेका छन्। साथै चाडबाडमा पहिलेजस्तो नाचगान, जमघट गरेर रमाइलो नगर्न पनि उनको सुझाव छ।
सकेसम्म एकअर्काबीच सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने उनको जोड छ। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा 'साइलेन्ट ट्रान्समिसन' को रुपमा संक्रमण फैलिरहेको उनको तर्क छ।
डा. पुन भन्छन्, 'काठमाडौंमा 'साइलेन्ट ट्रान्समिसन' भइरहेको छ। आइसोलेसनमा बसेकाहरूसँग कुरा गर्दा धेरैलाई संक्रमण कहाँबाट सर्यो भन्ने थाहा छैन। त्यसैले यो भित्रभित्रै विस्तारै सल्किरहेको छ।'
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १८, २०७७, ०४:४९:००